News Mansarovar » मनसुनमा शारीरिक सन्तुलन : कस्तो खाना हुन्छ उपयुक्त ? मनसुनमा शारीरिक सन्तुलन : कस्तो खाना हुन्छ उपयुक्त ? – News Mansarovar
मनसुनमा शारीरिक सन्तुलन : कस्तो खाना हुन्छ उपयुक्त ?
मनसुन सुरु भएको छ । यो समय अरू समयभन्दा बढी पौष्टिक खानेकुरा खानुपर्ने समय पनि हो । तर त्यति भन्दैमा हामीले आफ्नो शरीरको अवस्थालाई नजर अन्दाज गरेर खाना खाँदा यसले शारीरिक सन्तुलनमा समस्या सिर्जना गर्छ । यस किसिमको खानाले तपाईंको शरीरलाई हानि गर्छ। वास्तवमा जब मौसम परिवर्तन हुन्छ, तब हामी सबैको प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि घट्छ र यसलाई राम्रोसँग राख्न, मौसमी खानाको उपभोग फाइदाजनक छ। यदि तपाईं तौल घटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले व्यायाम र केही आहार खाने गर्नुपर्छ ।
मनसुनको समयमा वजन कम गर्ने केही आहारहरू अनुशरण गर्नुहोस् । यदि तपाईंले यी सल्लाहहरूलाई तपाईंको बानीमा ढाल्नु भयो भने तपाईंको वजन निश्चित रूपले बिस्तारै घट्न थाल्ने छ ।
एन्टिअक्सिडेन्ट गुण युक्त फलहरू खानुहोस्
तपाईं पनि मौसमी फल खाएर आफ्नो वजन कम गर्न सक्नुहुन्छ । यसको पछाडिको कारण यो हो कि पहिले तपाईंले धेरै एन्टिआक्सिडेन्टहरू खपत गर्दै हुनुहुन्छ । जसले तपाईको प्रतिरक्षालाई मजबुत पार्छ र संक्रमणबाट टाढा राख्छ । यो मात्र होइन, यदि तपाईंले यी फलहरू खानुहुन्छ भने तपाईं आफैं स्वस्थ जीवनशैलीतर्फ लाग्नुहुनेछ । त्यसकारण यस मौसममा भिटामिन सी युक्त फलफूलहरू खानु पर्छ ।
थोरै खाऔं र स्वस्थ रहौं
यदि तपाईंले आफूलाई मन लागेको खाना नियन्त्रणमा ल्याउन सक्नुहुन्न भने वर्षाको समयमा तपाईंले पकौडा र समोसा खान मनपर्छ । यसमा कुनै खराबी हुँदैन । तर तपाईंले एकैचोटि खानुहुँदैन । ताकि तपाईंको शरीरले खाना पचाउनको निम्ति समय प्राप्त गर्न सक्छन् ।
धेरै पानी पिउनुहोस्
मनसुनको समयमा हामीले गर्मी महसुस गर्छौं । जसले तिर्खा पनि उत्तिकै लाग्ने गर्छ । त्यसैले यो समयमा पानी पिउन छोड्नु हुन्न । हामीहरू पानी परेका कारण पानी पिउन कम गर्ने गर्छन् । तर अधिक पानी पिउँदा हाम्रो शरीरबाट विषालु पदार्थ बाहिर निस्कन्छ । जुन वजन कम गर्नको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ ।
सुप पिउने गर्नुहोस्
पानी पर्ने मौसममा रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउँदै आफ्नो शरीरलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि हामीले सुप पनि पिउनु पर्ने हुन्छ । यस बहानामा, धेरै तरकारीहरू तपाईंको शरीरमा जान्छन् साथसाथै पोषक तत्वहरू पनि शरीर भित्र जान्छन् ।
कम चिनी अदुवा चिया
मनसुनको समयमा अदुवा सहितको चिया पनि पिउन सकिन्छ । अदुवा हाम्रो स्वास्थ्य र वजन कम गर्नका लागि लाभदायक खानेकुरा मानिन्छ । तर चिनी हाम्रो स्वास्थ्य र वजन नियन्त्रणको लागि समस्या हो । त्यसैले चिनी कम र अदुवा धेरै राखेर चिया पिउन सकिन्छ ।
यहाँ केहि सुझावहरू छन् जुन तपाईं यस चर्को गर्मीको समयमा शारीरिक असन्तुलनको समस्याबाट छुटकारा पाउन मद्दत गर्छ ।